अस्ट्रेलियामा फ्लूको महामारी ! – Public Health Concern(PHC)
क्विन्सल्यान्डका प्रमुख स्वास्थ्य अधिकृत डा. जेनेट योङले सबै नागरिकलाई यथाशक्य फ्लुको खोप लगाउन आग्रह गरेकी छन् । उनले फ्लु सामान्य रुघाखोकी नभई गम्भीर प्रकारको भएकाले यसबाट बच्न खोप लगाउनु अत्यावश्यक भएको बताइन् ।
अस्ट्रेलिया सरकारले फ्लुबाट बच्ने खोपमा समेत नागरिकलाई सहुलियत दिने गरेको छ । कतिपय रोजगारदाताले समेत आफ्ना कर्मचारीलाई निःशुल्क खोप दिलाउने गरेका छन् ।श्रोत
Tags: Flu Outbreak In Australiahealth infohealth newspublic health update